राजनीतिमा रुमलिएको पारवहन नीति : नीतिविहीन ढुवानी व्यवस्थाले समस्या | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण राजनीतिमा रुमलिएको पारवहन नीति : नीतिविहीन ढुवानी व्यवस्थाले समस्या
on: May 10, 2019 लेख | दृष्टिकोण
राजनीतिमा रुमलिएको पारवहन नीति : नीतिविहीन ढुवानी व्यवस्थाले समस्या
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा हालै नेपाल चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । यसबाट नेपालका लागि चीनका चारओटा समुद्री र तीनओटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगको बाटोमात्र खुलेको छैन, उत्तरतर्फका ६ ओटा नाका मार्फत ढुवानी गर्न सकिने भएको छ । प्रोटोकलले नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधनलाई तिब्बतको सिगात्सेसम्म आवतजावतको बाटो खोलेको छ । भलै, यसको प्रयोजनका लागि पूर्वाधार विकास र व्यावसायिक सम्भाव्यताको पक्ष बहसको अलग विषय हो । नेपाल–चीन पारवहन प्रोटोकल पारवहनको पछिल्लो आयाम हो । कुनै पनि देशसँग यातायात र ढुवानीका साधन आवागमन सहज र सरलीकरण हुनु आफैमा सकारात्मक उपलब्धि हो । तर, पारवहनका सन्दर्भमा सम्झौता र कार्यान्वयनको परिदृश्य हेर्दा हाम्रो पारवहन स्पष्ट नीतिविनै चलिरहेको भान हुनु अस्वाभाविक होइन ।
अहिलेसम्म पारवहनको अभ्यास हेर्ने हो भने तेस्रो मुलुकसँगको अधिकांश ढुवानी भारतको कोलकाता बन्दरगाह भएर हुने गरेको छ । यो बन्दरगाहमा भौगोलिक र भौतिक सीमितता छ । अहिले पनि तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन यही बन्दरगाहको भरमा चलेको छ । पछिल्लो समय विशाखापत्तनम् विकल्पको रूपमा खुला भए पनि दूरीका कारण आयातकर्ताले सोचेजति लाभ उठाउन सकेका छैनन् । अहिले धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहको कुरा चर्चामा आएको छ । केही वर्षअघि कान्डला, पाराद्वीप र मुन्द्राको चर्चा चले पनि सेलाएको छ । बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाह प्रयोगको कुरा पनि थियो । अहिलेसम्म चलनचल्तीमा रहेका बन्दरगाहहरूको अवस्थिति हेर्दा पूर्वी बन्दरगाहलाई लक्षित गरेको देखिन्छ ।
भूपरिवेष्टित हुनुका कारण नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ट्रान्जिट पोर्टको समस्या छ । ट्रान्जिट पोर्ट प्रक्रिया सरलीकरण गर्न हालै कोलकाता बन्दरगाहमा प्रक्रियागत सुधार थालिएको समाचार आएको छ । तर, ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । सुधार प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले केही समयमा यसले निकास पाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । सरकारले समुद्री मार्गका ढुवानी सेवाप्रदायक सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । तर, सफलता हात लागिसकेको छैन । तेस्रो मुलुक र नेपालबीचको ढुवानीमा भारतीय रेलवे जोडिएको छ । यो बाध्यताका कारण पनि सिपिङ कम्पनीले नेपालमा आउन चासो नदेखाएको हुन सक्छ । अहिले अधिकांश यस्ता कम्पनीले कोलकाता वा अन्य भारतीय बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिने गरेका छन् । सीमित कम्पनीको सहभागिताले पनि पारवहन लागत महँगो पर्न गएको छ । हेक्का राखिनुपर्ने तथ्य के पनि हो भने खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा सिपिङ कम्पनीलाई दबाब होइन, लाभ दिएरमात्र आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको हाम्रो वैदेशिक व्यापारको आँकडा हेर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशत पारवहन भारतको भरमा चलेको छ । तथ्यांकका आधारमा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको परिमाण ३० प्रतिशत छ । समुद्री बन्दरगाहहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुको तात्पर्य भारतसितको व्यापार कम गर्ने नीति हो ? यो विषय स्पष्ट छैन । अहिलेसम्म पूर्वी बन्दरगाहमा जोड दिइएकोमा अब पश्चिमी देशहरूसितको व्यापारलाई लक्षित गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ । कि चीनसँग व्यापार बढाउन खोजिएको हो ? यदि, चीनसित व्यापार अभिवृद्धिको लक्ष्य हो भने त्यसका लागि चिनियाँ बन्दरगाहको आवश्यकता पर्दैन । अहिले नेपालले १४८ देशसँग व्यापार सम्बन्ध राखेको छ । अहिलेको व्यापार परिमाणलाई हेर्ने हो भने भारतीय बन्दरगाह बढी उपयोगी देखिन्छन् । अधिकांश व्यापार यूरोपमा केन्द्रित छ । चिनियाँ बन्दरगाहको नजीक अस्ट्रेलियामात्र पर्छ । कुन देशसँगको व्यापारको परिमाण कति छ र त्यसका लागि कुन बन्दरगाह उपयोगी हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । हामीकहाँ अहिले पारवहनको विकल्पको खोजी आवश्यकताभन्दा राजनीतिक आग्रहबाट मात्र बढी परिचालित छ कि भन्ने परेको छ । उत्तरतिरका बन्दरगाहमा बढेको रुचि विसं २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको परिणाम हो भने त्यसले अपेक्षित फाइदा दिन सक्दैन । वैदेशिक व्यापारमा बहुआयामिक अर्थ राख्ने पारवहनलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको विषय बनाइनु हुँदैन । आवश्यकता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर हाम्रो ढुवानी खर्चलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आन्तरिक ढुवानी पनि नीतिविहीन अवस्थामै चलेको छ । ९० प्रतिशत ढुवानीमा भारतको वर्चस्व छ । रेलदेखि सडकमार्ग सबैतिर हाम्रो ढुवानीमा भारतको व्यापार फस्टाएको छ । भोलि चीनसँगको पारवहनमा पनि यो अवस्था दोहोरिँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार देखा परेको छैन । सानो परिमाणको आन्तरिक ढुवानी पनि व्यक्तिगत तहमा चलेको छ । संस्थागत हुन सकेको छैन । कुनै नीति र नियमले ढुवानीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । पारवहनसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनको अभाव छ । यसबाट पारवहनमा प्राप्त हुने वित्तीय सुविधा, जोखिम वहनजस्ता सुविधा उपलब्ध छैनन् । पारवहन सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व पनि गुमेको छ । पारवहनमा संलग्न जमात स्वभावैले कानूनी दायरामा आउन चाहेको छैन । सरकारले पनि समेट्ने तत्परता देखाको छैन । एकातिर हामी सार्क राष्ट्रबीच निर्बाध रूपमा पारवहनका कुरा गरिरहेका छौं, अर्कातिर आन्तरिक ढुवानी समेत व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक ढुवानीको कारोबारमा बा≈य देशको वर्चस्व छ । सरकारले हालैमात्र रेल र पानीजहान सञ्चालनका निम्ति कानून निर्माण अघि बढाइएको बताएको छ । पारवहनमा बिचौलियाको निकास र प्रतिस्पर्धा बढाएर खर्च न्यूनीकरणका लागि यस्ता कानूनी प्रावधानलाई पूर्णता दिएर अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
अहिले रेलमार्गका कुरा पनि प्रशस्तै भएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटदेखि दीर्घकालीन योजना समेतमा यस्ता योजना निरन्तर रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण रेलमार्ग योजनाको चर्चा छ । तर, रेलमार्गमा के ओसारपसार हुने ? मालसामान ओसार्ने कि यात्रु ? यसको कुनै अध्ययन र प्रक्षेपण भएको छैन । संसारका कुनै पनि रेल यात्रु आवागमनबाट उँभो लागेका छैनन् । भारतमै पनि यात्रु ओसारेर त्यहाँको रेलले घाटा बेहोरेको छ । मालसामान ढुवानी नै रेलको मुख्य आम्दानी हो । हामीकहाँ रेलमा ढुवानीयोग्य मालसामानको उत्पादन कति छ ? यसको व्यावसायिक प्रक्षेपणलाई अझै पनि आवश्यक ठानिएको छैन । जलमार्गकै कुरा गरौं, पूर्वाधारमा दूरदृष्टि राम्रो कुरा हो । नेपालमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता कति छ ? यो कसले उपयोग गर्ने हो ? यसमा आवश्यक परिमाणमा विमर्शसमेत भएको छैन । यस्ता पूर्वाधारको उपयोग निजीक्षेत्रले गर्ने हो भने नेपालको निजीक्षेत्र त्यसका लागि सक्षम छ कि छैन ? यसतर्फ सोचविचार भएको छैन । रेलमार्ग र जलमार्ग सानो खर्चमा तयार हुने पूर्वाधार होइनन् । यसमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी लाग्छ । यति ठूलो लगानीमा तयार हुने पूर्वाधारको व्यावसायिक सम्भाव्यता हुनुपर्छ । यदि व्यावसायिक सम्भावना नकारात्मक छ भने त्यसलाई कसरी सकारात्मक बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन सकिन्छ । अहिलेसम्म नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित देशको ढुवानी लागतको तुलनात्मक अध्ययन समेत भएको जानकारी छैन ।
पारवहनका आयामहरूमा आवश्यकता, अध्ययन र सम्भाव्यताको खोजीभन्दा राजनीतिक आग्रह बढी देखिन्छ । यसमा नीतिभन्दा राजनीति हाबी छ । पारवहन र ढुवानीलाई अहिलेसम्म आर्थिक विकासको मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको दीर्घकालीन विकास योजनामा पनि यो विषय छुटेको छ । यो विषय विकास नीतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रलाई अग्रपथमा डोर्‍याउन स्पष्ट र व्यावसायिक दृष्टिकोणसहितको पारवहन नीतिको खाँचो छ । राजनीतिक आग्रहको टेकोमा उभ्याइएका योजनाले लक्षित उद्देश्यलाई बल पुर्‍याउन सक्दैनन् । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापारको प्रक्षेपण गरेर पारवहनका सरोकारलाई समेट्न एकीकृत नीति र कानून बनाइनुपर्छ । जसले क्षेत्रीय र वैश्विक उद्देश्यले अघि बढाइएका पारवहनका अवधारणामा हाम्रो भूमिका र स्वार्थलाई मार्गनिर्देश गर्न सकोस् ।